Valise à roulette : Ny zoma 25 febroary 2022 no nilazan'i Ministry ny fizahantany Joel Randriamandranto ny tsy azo itondrana izany anaty fiaramanidina
mercredi, 09 mars 2022 20:16
Lasa resabe ity tsy fahazoana mitondra valizy misy kodiarana any anaty fiaramanidina ity, ka nilazan'ny Minisitry ny fizahantany Joel Randriamandranto, fa diso ny filazan'ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa tsy nisy fanapahana an'izany teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra natao ny alarobia 23 febroary 2022.
Namory ireo kaompaniam-pitaterana miasa eto Madagasikara anefa ny minisitry ny fizahan-tany ny zoma 25 febroary 2022 tao amin'ny efitranon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ka noraisiny tsirairay ireo kaompania ireo nandritra ny Ora iray avy.
Nanatrika izany ny solotenan'ny Ministeran'ny raharam-bahiny, anisan'izany ny Sekretera jeneraly, noho ny tsy naha teto an-toerana ny minisitra fa lasa any ivelany, araka ny fanamafisana nataon'i Minisitra Joel Randriamandranto.
Nanatrika teo ihany koa ny ekipan'ny faditseranana na ny Douane, izay natrehan'ny Tale jeneralin'ny Douane.
Teo ihany koa ny solotenan'ny ministeran'ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, izay nomarihan'ny minisitry ny fizahan-tany fa tsy eto an-toerana ihany koa ny minisitra Tinoka Roberto, fa lasa any amin'ny faritany, ka voatery izy minisitry ny fizahan-tany no mitarika ny fivoriana.
Teo ihany koa ny solotenan'ny ministeran'ny fahasalamana.
Nambaran'i Minisitry ny fizahan-tany Joel Randriamandranto mazava ary, fa lahadinika teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny hanokafana ny sisin-tanin'i Madagasikara, fa misy fepetra ara-toekarena sy ara-pahasalamana, satria dia baiko avy amin'ny Filoham-pirenena ny anajanonana amin'ny fomba rehetra ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena, ka dia tapaka tamin'izany fa sac de voyage maivana sy izay entana tena ilaina ihany no entin'ny mpandeha, ary nazava ny teninin'i minisitry ny fizahan-tany, Joel Randriamandranto, fa tsy afaka mitondra ireny valise à roulette ireny miditra ny fiaramandina, atao bagage à main ny mpandeha.
Misy ny fisavana ataon'ny ladoany hoy hatrany izy, hisavana ny entana tsitsinina, bagage à main alohan'ny hiondranana amin'ny fiaramanidina (avant passerelle).
Tsy azo ampiasaiana ny coffre ny avion izay manana izany.
Mazava eto izany fa tsy marina velively ny filazan'ny minisitra Joel Randriamandranto, fa tsy nodinihina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izany, ary nanambara mazava izany manoloana ireo Kaompaniam-pitaterana izy, nefa dia atorany any amin'ireo minisitra izay tsy nanatrika akory ny filan-kevitra amin'ny tsy naha teto an-toerana azy ireo ny resaka.
Mbola afaka mitana izany andraikitra izany ve ny minisitra iray izay mandainga, ary manebaka ireo minisitra namany, nefa minisitra tsy nandray anjara tamin'ny lahadinika akory ? Sa rehefa iza dia terana hiala ny minisitra iray, fa rehefa iza dia afaka manipy hoditr'akondro amin'ireo namany?
Ny Praiminisitra moa, toa ny mahazatra, dia naman'ny tsy misy, ka tsy ahenoam-peo amin'ireto minisitra anaty governemanta mamingana ny namany fa tsy ny asa fampandrosoana no imasoana.